Home Wararka Dibada Jacinta Wambu: “Cabsida aan ka qabo ragga si weyn ayay ii saameysay,...
Jacinta Wambu: “Cabsida aan ka qabo ragga si weyn ayay ii saameysay, aniga oo 24 jir ah waligeey wiil ima uusan shukaansanin
Jacinta Wambu waa gabadh 24 jir ah oo ku nool dalka Kenya waxay sheegtay in cabsi ay lasoo deristo mar kasta oo ay aragto ragga xitaa waxaa xilliggaas ku adag inay hadasho.
Gabdhan xitaa indhaha ma siin karto ragga doonaya inay shukaansadaan ama kuwa kale ee danta kala dhexeyn karta.
Jacinta waxay qirtay in dhibaatadan lasoo deristay ay tahay mid nafsaani ah ama xanuun dhanka maskaxda ah oo ku dhacay, waana dhibaato ay lasoo daalaa dhaceysay tan iyo yaraanteedi.
“Mararka qaar waxaan damcaa in aan sito boor uu ku qoran yahay, aniga cidna la hadli maayo sababta oo ah meel kasta aan tago dadka waxay i weydinayaan, maxaad u aamusantahay? dabcan waa xaalad aad u daran” ayay tiri Jacinta oo u warrameysay Anne Ngugi oo ka tirsan BBC-da laanta Sawaaxiliga.
Xitaa waxay ka cabsoota ragga kusoo ag dhawaada ama kuwa ku sugan agagaarkeeda.
Cabsi joogta ah
Marka ay kasoo muuqato baraha bulshada Kenya si xaaladdeeda ay uga sheekeyso ayaa waxay dareenta cabsi ah sida dadka ay uga falcelin doonaan ama sida ay ula dhaqmi doonaan marka ay ka hadleyso dhibatada heysata.
Jacinta waxay sheegtay inay la nooshahay xaalad la yiraahdo, ‘anthrophobia’ oo ay dhakhaatiirta ku tilmaameen in qofka uu ka cabsado in uu la hadlo dad kale.
“Waad garan kartaa xiriirka ka dhexeyn kara, in aad xishooto ama xaaladda aan hadda ku jiro aniga oo aanan wax xiriir ah la sameyneyn karin bulshada”
Waxay sidoo kale sheegtay in arrintani ay si weyn u saameysay nolosheeda xitaa aysan dooneynin inay tegto goobaha isu imaatinka, mar kasta oo ay isku daydo inay tegto goobahaas ay lasoo deristo cabsi iyo argagax.
Nolosheyda inta badan waxaan kusoo qaatay kalinimo, xitaa la iima shukaansan karo, lamana kulmi kari dhalinyarada da’deeda ah, cabsi ayaa ila soo deristay” ayay tiri Jacinta Wambu.
Tusaale ahaan waxaa igu adag in dadka aan la qadeeyo , xitaa waxaan ka baqaa in maqaaxi aan tego oo aan wax ka cuno iyadoo dadka ay dhooban yihiin halkaas, ayay tiri Jacinta.
Maxay ragga uga cabsootaa?
“Cabsida aan ka qabo ragga si weyn ayay nolosheyda u saameysay, heer waxaan gaaray aniga oo 24 jir ah, in waligey uusan wiil i shukaansanin, weligeey la iima shukaansanin, waxaan ka welwelsanahay sidii aan uga baadbaadi lahaa dhibaatadan?” ayay tiri Jacinta.
Jacinta ayaa sidoo kale sheegtay inay iska ilaaliso ragga doonaya inay xiriir la yeeshaan maadama ay ka cabsaneyso inay hor istaagto.
“Rag gaaraya 15 ilaa 20 ayaa igu raad joogay si xiriir ay iila yeeshaan, wey isku dayeen in wax ay ii sheegtaan balse waan ka cararay, waxaan u maleynayay in arrintaas ay ceeb tahay, aad ayaan uga cabsoonayay raggaas”
Gabadhan nolosheeda weligeed ma aysan yeelin qof saaxib ah xitaa kuwa isla shaqeeyaan, kaaga sii daran, waxay ka cabsataa ragga agagaarkeeda ku sugan ee ehelka ah sida adeerkeed ama abtigeed.
“Waxaa jiraa sawir aan la galay wiil 3 jir ahaa oo agteyda taagnaa, waxaa sawirka ka muuqday sida aniga oo ooynayo, hooyadey waxaan mar kasta weydiyaa, maxaan u ooynayay? waxay iigu jawaabtaa, waxaa ku garab taagnaa wiil yar, markaa waxaan u muuqdaa in markii aan yaraa aanan helin daryeel nafsaani ah ama mid maskaxeed” ayay tiri Jacinta.
Markii aan iskuulka dhiganayay wax saaxib ah ma laheyn, kalinimo ayaa doorbiday, xitaa kuma hadli jirin gudaha fasalka”
Maxay dhakhaatiirta kula taliyeen?
Jacinta waxay sheegtay inay la kulantay qof ku takhasusay cilmu nafsiga oo ay u sheegatay dhibaatada heysta, kaas oo talooyin siiyay.
Waxay haatan sheegtay in haatan ay nolosheeda ay wax iska baddaleen isla markaana ay meesha ka baxeen caqabadihii heystay sida casbiga iyo jahwareerka harreeyay nolosheeda.
Hataan waxaa la talisaa Ms. Mercy Ogonda oo ku takhasustay cilmu nafsiga, dhakhatarrada waxay xaqiijisay in Jacinta ay la nooshahay xaalad cabsi ah oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyin argagax leh oo ay lasoo kulantay markii ay yareyd.
Previous articleLiverpool Oo Doonaysa Saxiixa Xiddiga Marco Asensio
Next articleXildhibaan Qoono oo markale soo qoray qormo koobeysa musuqa ka jira Maamulka Hirshabeelle
Maxaa looga hadlay kulanka Rooble iyo Axmed Madobe?
Antonio Rudiger Oo Shaaca Ka Qaaday Xiddig Chelsea Ah Oo Ku...
Koox Hubeysan Oo Wiil Iyo Adeerkiis Ku Dishay Xaafad Ka Tirsan...